Shiinaha oo cuna-qabateyn ku soo rogay siyaasiyiin caan ah oo ka tirsan xisbiga Trump | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Shiinaha oo cuna-qabateyn ku soo rogay siyaasiyiin caan ah oo ka tirsan xisbiga Trump
Shiinaha oo cuna-qabateyn ku soo rogay siyaasiyiin caan ah oo ka tirsan xisbiga Trump
Shiinaha ayaa sheegay in cunaqabateyn uu kusoo rogayo 11 qof oo u dhashay Mareykanka oo ay kamid yihiin sanataro iyo saraakiil caan ah.
Qoraalka sawirka,Marco Rubio iyo Ted Cruz waa siyaasiyiin caan ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga
Cunaqabateyntan ayaa imaaneysa kaddib markii uu Mareykanka cunaqabateyn kusoo rogay 11 sarkaal oo Shiinees ah iyo dad kale oo u dhaw dhinaca Hong Kong oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin xoriyadda dhanka siyaasadda.
Saraakiisha uu bartilmaameedsanayo Shiinaha waxaa kamid ah sanatarro ka tirsan xisbiga Jamhuuriga sida Ted Cruz, Marco Rubio iyo Kenneth Roth oo ah agaasimaha fullinta ha’yada samafal oo qaabilsan xuquuqda aadanaha.
Sidoo kale liiska waxaa ku jiraa senetarrada kala ah Tom Cotton, Josh Hawley iyo Pat Toomey iyo Chris Smith-dhammaantood waxay ka tirsan yihiin xisbiga jamhuuriga iyo shakhsiyaad kale oo ka howlgala ha’yado samafal iyo ururo u doodo xuquuqul insaanka.
“Shiinaha wuxuu go’aansaday in uu cunaqabateyn kusoo rogo kuwa sida khaldan u faragelinayo arrimaha la xiriira xaaladda Hong Kong” ayuu yiri Zhao Lijian oo ah afahayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.
Balse faahfaahin kale kama uusan bixin waxa ay ku saabsan tahay cunaqabateynta.
Shiinaha ayaa bishii lasoo dhafaay shaaciyay in cunaqabateyn uu kusoo rogay sanatar Rubio, Cruz iyo saraakiil kale kaddib markii ay si weyn u dhaleeceeyeen sida xukuumadda Beijing ay ula tacaashay xaaladda muslimiinta laga tiro badan yahay ee Uighur ee ku sugan gobolka Xinjiang.
Xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay sii xumaanayay, Mareykanka wuxuu dhaleeceeyay dhaqdhaqaaqyada uu Shiinaha ka wado Hong Kong, dhibaatada uu ku hayo dadyowga ka tirsan muslimiinta laga tiro badan yahay ee Uighur iyo sida uu u maareeyay cudurka safmarka ee Corona.
Madaxweyne Trump ayaa markii uu safmarka saameeyay dalkiisa dhaleeceen u jeediyay Shiinaha isla markaana sheegay in uu yahay ‘Feyraska Shiinaha’
Trump ayaa jimcihii amar ku bixiyay in cunaqabateyn lagu soo rogo madaxa fullinta ee Hong Kong Carrie Lam iyo madaxa booliska, wuxuu xayiraad kusoo rigay hantidooda isla markaana wuxuu ka hor istaagay in ganacsi ay ka sameysan karaan Mareykanka.
Isago ka jaawabayay cunaqabateynta Mareykanka, afahayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Zhao Lijian wuxuu sheegay “Waxaan kasoo horjeednaa oo aan si xooggan u cambaareyneynaa tallaabada iska cad ee lagu faragelinayo arrimaha Hong Kong”
“Waxaan carabka ku adkeynayaa in Hong Kong uu ka tirsan yahay Shiinaha, arrimaha Hong Kong waa arrimo dhaakhili ah, mana dhici karto quwado shisheeye inay soo farageliyaan. Shiinaha wuxuu ugu baaqayaa Mareykanka in uu aqoonsado xaaladda uuna dib u saxo qaladaadkiisa ku aadan arrintaas”
Sanatarka Florida Marco Rubio ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray “Bishii lasoo dhaafay Shiinaha xayiraad ayuu igu soo rogay, maanta cunaqabateyn ayay igu soo rogeen, waxaan u maleynayaa in aysan i jeceleyn”
Dhanka kale, sanatarka Missouri , Josh Hawley ayaa Twitter-ka soo dhigay “Sameeya argoosi kasta oo aad dooneysaan, ismana dhiibayo”
Dhanka kale, sanatarka Arkansas, Tom Cotton ayaa isna sheegay “Xisbiga shuuciga ee Shiinaha waa halista ugu weyn ee ka dhanka ah xoriyadda adduunka, weligeyna dib ugama laaban doono u dirirkeeda”
Shiinaha oo cuna-qabateyn ku soo rogay siyaasiyiin caan ah oo ka tirsan xisbiga Trump was last modified: August 12th, 2020 by Admin
Joe Biden oo u magacaabay Kamala Harris Musharaxa Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka
Roob Xoogan Oo Xalay Ka Da’ay Magaalada Baydhabo
Sawiro: Kulanka Farsamo iyo Xog iswedaarsiga Agaasimiyaasha Guud Wasaaraddaha Dastuurka Dowlad Goboleedyada Dalka iyo Kan Dowlada Federaalka Somaaliya Oo Baydhabo Ka Furmay.